त्रिअवि भित्रको ‘क्याफे’ विमानस्थल सुरक्षामा प्रमुख खतरा | Citizen Post News
त्रिअवि भित्रको ‘क्याफे’ विमानस्थल सुरक्षामा प्रमुख खतरा
२०७५ चैत्र २५ गते ०८:३९
काठमाडौं । एक ताका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध मुद्रा कारोबारीका रुपमा अच्यूत हाडाको नाम बदनामी थियो । अनि अहिले पनि सुन र डलर तस्करीका बादशाहको रुपमा दिपक मल्होत्रालाई लिइन्छ । यि दुई पात्रहरुले एयरपोर्टमा आउने जो कोही प्रहरीका हाकिमलाई नगदले खरिद गरेर एयरपोर्टबाट भए-नभएको सबै काम बैध-अवैध गराउँथे, कसैले गरिरहेका छन् । तर अहिले त्यो भन्दा पनि ठूलो नटवरलालका रुपमा अर्का डलर तस्कर फेला परेका छन्उ-नी हुन् शुक्रबार पक्राउ परेका सुवास श्रेष्ठ ।
त्रिअविको अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ मोटरसाइकल पार्किङ स्थलसँगै कान्तिपुर क्याफे सञ्चालन गर्दै आएका सुवास श्रेष्ठलाई अहिलेसम्म कसैले पक्राउ गर्न सकेको थिएन । विगत लामो समयदेखि उनले त्रिअविको बाहिर र भित्र रहेको उनको क्याफेबाट डलर तस्करीको अवैध धन्दा चलाउँदै आएका थिए । शुक्रबार उनलाई प्रहरीले रंगेहात पक्राउ गरेपछि नेपाल प्रहरी संगठनभित्र ठुलै हंगामा भयो । प्रहरीका अनुसार करिब २७ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबर विभिन्न देशका मुद्रा उनको साथबाट बरामद भएको थियो ।
थाइ एयर प्लाइट नम्बर टीजी ३२० विमानबाट बैंककतर्फ जानै लाग्दा श्रेष्ठसहित उनका परिवारका पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । एयरपोर्ट प्रहरीका अनुसार ४६ बर्षीया उमादेवी श्रेष्ठ (श्रीमती) १७ र ४ बर्षका दुई छोरी र ११ बर्षीय छोरासहित उनी बैंकक जान लागेका थिए । त्रिअवि अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको गेट नम्बर ५ मा प्रवेश गर्न लाग्दा श्रेष्ठलाई शंका लागेर सादा पोशाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गरेको थियो । चेकजाँचका क्रममा कानुनले बर्जित गरेको विभिन्न देशका हजारौं मुद्रा उनको साथमा भेटिएपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । एयरपोर्ट प्रहरीले उनलाई आइतबार राजश्व अनुसन्धान विभागलाई बुझाएको छ ।
सुरक्षा चेकजाँच पार गरेपछि कफी सपः
सुवासले सञ्चालन गरेको कफी सप नै अवैध ठाउँमा सञ्चालन भइरहेको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट विश्वभर सुरक्षा चेकजाँच पार गरेपछिको क्षेत्रमा कही पनि कफी सप हुन्न । तर उनले विगत लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको कफी सप त्रिअविको सुरक्षा चेकजाँच पार गरिसकेपछिको क्षेत्रमा छ ।
उनले कफी र ड्राई फुड विक्री गर्नका लागि उक्त ठाउँको इजाजत लिएता पनि उनले कफी सपबाट प्याकिङ फुडको पनि विक्री गर्दै आएका छन् । बाहिर रेष्टुरेन्टबाट प्याकिङ फुड भित्र लैजाने नाममा र भित्रबाट सामान बाहिर ल्याउने नाममा उनले कुनै पनि अवैध काम गर्न सक्छन्, गरिरहेका छन् पनि ।
कफी सपका कारण सुरक्षा खतराः
भविश्यमा वा कुनै बेला पक्राउ परेका श्रेष्ठले प्याकिङ फुडमा अध्याधुनिक हतियार भित्र पठाए भने त्यसको जवाफदेही को हुने ? हतियारधारी समूहले उनीमार्फत भोली कुनै पनि विमान अपहरण गर्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । किनकी प्रवेश पास भएका एयरपोर्ट कर्मचारीमाथि कुनै पनि चेकजाँच हुने गरेको छैन । सुवासले शुक्रबार पनि त्यही ‘ट्रिक’ लगाएर अवैध डलर छिराउन चाहेका थिए । उनको चर्तिकलालाई नियालीरहको प्रहरी शंका लागेपछि चनाखो भएको थियो ।
शुक्रबार जब उनी पास देखाउँदै विमानस्थल बाहिरबाट भित्र प्रवेश गरे, बिना झोला भित्र प्रवेश गरेका थिए । उनी भित्र छिरेपछि आफ्नो कफी सप पुगे । त्यहाँबाट बाहिर निस्केर गेट नम्बर ५ पुग्दा उनको साथमा झोला देखियो । त्यसपछि सादा पोशाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले शंका लागेपछि चेकजाँच गर्यो । सो क्रममा उनले पासपोर्टमा छाप लगाएको भन्दा सयौं गुना बढि विभिन्न देशका अवैध मुद्रा भेट्यो ।
जसको कुनै पनि निकायबाट स्विकृती लिइएको थिएन । यसरी नै उनी प्रहरीको फन्दामा परेका थिए । त्यसो त उनले कफी सपबाट वियर पनि बिक्री गर्दै आएका छन् । यसअघिका डिएसपी गणेश चन्दा एयरपोर्टमा हुँदा यात्रुले विमानमा खाएर हो हल्ला गर्न सक्ने संभावनालाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँबाट वियरको विक्री निषेध गरेका थिए । तर अहिले फेरी उनको कफी सपबाट वियर विक्री भइरहेको एयरपोर्ट सुत्रले बतायो । उनको कफी सपबाट दैनिक १५-२० लाखको ब्यापार हुने गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार उनको सम्पर्क सिधै नेकपाका प्रभावशाली नेता बामदेव गौतमसँग रहेको छ । उनका अलवा प्रहरीका प्रत्येक हाकिमसँग पनि उनको बाक्लै उठबस रहेको छ । शुक्रबार पक्राउ परेका श्रेष्ठको साथबाट प्रहरीले थाई भाट २२ हजार १५०, युरो १३८०, अमेरिकी डलर १० हजार र चिनियाँ युआन ८० हजार बरामद गरेको थियो ।